sexual Archives - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / sexual
Tags: effects, featured, healthtips, humanhealth, semen, sextips, sexual
खबरडेस्क, २४ फागुन । वीर्य के हो ? हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि पुरुषको यौन उत्तेजनालई निरन्तरता दिन सकिए यौन प्रतिक्रिया चक्रको तेस्रो चरणमा चरमसुख पाउने हाराहारीमा लिङ्गबाट एक प्रकारको सेतो तरल पदार्थ निस्कन्छ, जसलाई वीर्य भनिन्छ ।… बाँकी अंश »
कसरी गर्छन् महिलाले हस्तमैथुन ?
Tags: alert-news, Female, femalemasturbation, sextips, sexual, sexualdesire, sexualsatisfaction
खबरडेक्स,२९ माघ । यौनआनन्द प्राप्त गर्न अनि यौन तृष्णा शान्त पार्न आफ्नो यौनाङ्ग वा यौन संवेदनशील अङ्ग आफैंले चलाउने क्रियाकलाप नै हस्तमैथुन हो। कतिपयले पुरुषले हस्तमैथुन गर्ने भए पनि महिलाले गर्दैनन् भन्ने मान्छन्, जुन सत्य होइन। पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूले कम… बाँकी अंश »
सेक्स गर्ने नयाँ तरीका थाहा पाउनुहोस् है..
Tags: alert-news, health, pleasure, sexmethod, sextips, sexual
खबरडेक्स,२६ माघ । प्रायजसो मानिसहरू सेक्स गर्नका लागी नयाँ नयाँ तरिकाहरू खोजी गरिरहने गरेको पाइन्छ । मानिसहरूको यहि कुरालाइ ध्यानमा राख्दै गूगल ग्लासले एउटा यस्तो ऐप्स बनाएको छ । हजुर, अब सेक्स टेप बनाउने जमाना गएको छ । यस २१… बाँकी अंश »
Tags: featured, sextips, sexual, virgintest
खबरडेक्स,२५ माघ । पहिले-पहिले महिलाको योनिच्छद च्यातिएको वा नच्यातिएको आधारमा कुमारीत्वको आँकलन गरिन्थ्यो । प्रत्यक्ष रूपमा यो च्यातिएको थाहा पाउन विभिन्न उपाय गरिन्थ्यो । विवाहपछि नवविवाहितासँग पहिलो यौन सम्पर्कमा रगत आउनुलाई नै योनिच्छद च्यातिएको प्रमाणका रूपमा लिइन्थ्यो अर्थात् अक्षत-योनि भएको… बाँकी अंश »